Baby teether Factory |China Baby teether Manufacturers, mpamatsy
Ambongadiny fiarovana Baby Molar Teether kilalao biby Giraffe Teether Organic Baby Teethers miaraka amin'ny boaty
Ity teether giraffe zaza mahafatifaty ity dia hanamaivana ny fanaintainan'ny nify ho an'ny zazakely.Ny fitsakoana rehetra dia hanampy amin'ny fanalefahana ny fanaintainan'ny hihy ary hampiroborobo ny fivoaran'ny nifin'ny zaza sy ny valanoranony ambony.Raha ampitahaina amin'ny vokatra teether amin'ny fitaovana hafa, ity silicone teether ity dia azo antoka kokoa ary manana endrika bebe kokoa amin'ny ety ivelany, izay mety kokoa amin'ny zazakely.
Amazon Silicone Baby Mitsako Kilalao fiarovana Teething Tube Massager Gum
Vita amin'ny silicone grade food, mety amin'ny zazakely ny mitsako sy manamaivana ny fanaintainana amin'ny vanim-potoanan'ny nify.
Anaran'ny vokatra: Fantsona nify zazakely
Habe: 17.5*1 sm
Lanja: 16,5 g
Fitaovana: Food Grade Silicone
Vakana silicone azo tsakoina ho an'ny zazakely fehin-tanana teething peratra rattle vakana silicone teether zazakely
100% azo antoka ho an'ny zazakely- Ny teethers zazakely dia mampiasa silikôma voajanahary voajanahary madio sy loko voajanahary, malefaka, mateza ary tsy misy BPA.Ny fitaovana azo antoka sy malefaka dia tsy handratra ny vavan'ny zaza, ka tsy mila manahy momba ny fiarovana ny zaza ianao.
Ankizy Teething Ring Voankazo watermelon endrika Silicone mitsako Teethers Baby Teether kilalao
1. Ny kilalaon'ny nify silika dia afaka mampitony sy mandrisika ny nifin'ny zaza, manamaivana ny fanaintainana ary manampy nify vaovao hitsimoka.Ny baby teether no kilalaon-jaza mety ho azy ireo.
2.Easy fanadiovana - Fanasan-damba azo antoka (top rack) sy ny vata fampangatsiahana namana, na sasao amin'ny malefaka savony sy ny rano mafana, hosasany sy namaoka amin'ny servieta madio, ity silicone teether kilalao dia mora diovina.
3.100% Safe - 100% akora silicone sakafo.Azo antoka ho an'ny zazakely izy io.food grade silicone teether
Kilalao tsikombakomba tsy tantera-drano ambongadiny avo lenta silica Gel akora sakafo Kilalao zazakely Teether
Ny fitaovan'ny vokatray dia silicone 100% BPA maimaim-poana.
Tsy misy poizina tanteraka izany, ary ankatoavin'ny FDA / SGS / LFGB / CE.
Satria mivarotra vokatra ho an'ny zazakely hampiasaina izahay, fantatray fa tena ilaina ny vokatra azo antoka.
Manana fepetra hentitra momba ny kalitao izahay, ary manana fanaraha-maso kalitao telo izahay.
Farany, manana ny ozininay manokana izahay, Ka afaka manome anao ny vidiny tsara indrindra sy ny serivisy matihanina.
Hand Grip Baby Turtle Toothbrush Teether Zaza vao teraka Mitsako Teething kilalao Silicone Baby Teethers
FITIAVANA MOMBA SY MIFILAZANA - Tsy toy ny kilalao nify hafa izay henjana sy henjana, ny Sperric teethers dia natao tsara miaraka amin'ny haitao tonga lafatra ho an'ny fitsakoana sy hampitony ny ditin'ny zanakao.Ampio ny zanakao kely handalo ireo fotoan-tsarotra ireo miaraka amin'ireo singa mampitony tsara tarehy.
Giraffe fandriana zazakely mihantona kilalao Pendant Silicone Baby malefaka ambongadiny betsaka Teething kilalao silicone mahatsikaiky giraffe baby teether
Fitaovana azo antoka - 100% silicone kilasy sakafo, tsy misy poizina, tsy misy BPA ny FDA.
Ny fitaovana malefaka sy malefaka dia mampihena ny mety ho ratra amin'ny vava.